मेडिकल रेकर्ड रिलीज - फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टर
नोट: फल्ज चर्च हेल्थकेयर सेन्टर, प्रति भर्जिनिया कोड (.8.01.०१--413१)), प्रति पृष्ठ $ ०.0.50० सम्म (अधिकतम pages० पृष्ठहरूको लागि) $ २०.०० खोज र ह्यान्डलिंग शुल्क बाहेक एक प्रतिलिपि शुल्क लगाउन सक्छ। तपाईंको मेडिकल रेकर्ड उपलब्ध गराउनको लागि शुल्क के हो भनेर तपाईंलाई सूचित गरिनेछ। क्रेडिट / डेबिट कार्ड वा नगद वा क्रेडिट / डेबिट कार्ड द्वारा फोनमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ यदि तपाइँ केन्द्रमा तपाइँको रेकर्ड छान्नुहुन्छ।
फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टर हुनेछ छैन ईमेल बिरामी रेकर्ड.
मेल द्वारा बिरामी रेकर्डहरू पठाउँदा, फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टरले अतिरिक्त $ $ 7.95। शुल्क लिनेछ र प्राथमिकता मेलमार्फत रेकर्डहरू पठाउँनेछ।
चिकित्सा रेकर्ड को जारी को बारे मा अधिक प्रश्नहरु को लागी, कृपया हामीलाई 703०532--2500-XNUMX२-XNUMX-२XNUMX०० वा ईमेलमा कल गर्नुहोस् चिकित्सा-records@fallschurchhealthcare.com .
म यसै आधारमा फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टरलाई आधिकारिक बनाउँछ तल उल्लेखित चिकित्सा रेकर्डहरू प्रदान / जारी गर्न:*
मेरो चिकित्सकको कार्यालयमा
कसरी तपाइँ तपाइँको मेडिकल रेकर्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ?*
म तिनीहरूलाई मलाई पठाउन चाहान्छु।
म तिनीहरूलाई लिन फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टरमा आउने छु।
मेलिंगको लागत ($ 7.95) कुनै पनि प्रक्रिया शुल्कमा थपिनेछ। रेकर्ड प्राथमिकता मेल द्वारा पठाइनेछ।
रेकर्ड पिक-अप बुधवार :9: --: --० वा शनिबार ११:०० - १२:०० बजे अनुसूची गर्न सकिन्छ।
कृपया तपाईंको पत्राचार ठेगाना प्रदान गर्नुहोस्:*
चिकित्सक / चिकित्सा अभ्यास नाम*
चिकित्सक / चिकित्सा अभ्यास फोन नम्बर*
कृपया मेरो डाक्टरलाई रेकर्डहरू यस मार्फत पठाउनुहोस्:*
मेलि$को लागत $ mail। Mail any कुनै पनि प्रक्रिया शुल्कमा थपिनेछ। रेकर्ड प्राथमिकता मेल द्वारा पठाइनेछ।
अनुरोधका लागि कारण (हरू) (लागू हुने सबै जाँच गर्नुहोस्)
निरन्तर हेरचाहको लागि
स्थायी हस्तान्तरण को लागी
अन्य - कृपया निर्दिष्ट गर्नुहोस्
अनुरोध गरिएको मेडिकल रेकर्ड तोक्नुहोस्*
पूर्ण मेडिकल रेकर्ड
केवल विशिष्ट सेवा मितिहरूको लागि
उल्लेखित रूपमा मात्र प्रयोगशाला परिणामहरू
विशिष्ट सेवा मिति*
विशिष्ट प्रयोगशाला परिणामहरू*
अन्य (कृपया निर्दिष्ट गर्नुहोस्)*
कृपया तपाईंको फोटो आईडीको छवि अपलोड गर्नुहोस्*
अधिकतम फाईल आकार: 2१२ MB